Linux Journal yadzoka neSlashdot Media | Linux Vakapindwa muropa
Linux Journal yadzoka neSlashdot Media
Gore rakapera ndaifanira kurova paLinux Vakapindwa muropa nhau dzinosuruvarisa dzekutsakatika kwekupedzisira kweLinux Journal, chimwe chezvinyorwa zvekare muLinux nyika. Neraki, mugore rakapfupika remashoko akanaka, mInguva zvakare yekutaurirana inonakidza nhau dze kudzoka kwake. Kubva ikozvino zvichienda zvichashanda pasi pemuraira weSlashdot Media.
Kuti tinzwisise kukosha kwenhau tinofanirwa kuratidza kuti eTiri kutaura pamusoro pemagazini yekutanga munyika yakatsaurirwa kunyora nezve Linux kernel uye zvakagoverwa zvichibva pairi. Muchinyorwa chekutanga chakaburitswa munaKurume 1994 vapepeti vaive Phil Hughes naBob Young, avo muna1993 vaive vabatsiri veRed Hat, uye mariri Linus Torvalds akabvunzurudzwa.
Makore mapfumbamwe apfuura, munaGunyana 2011, magazini iyi yaiburitswa mumadhijitari chete.
Iyo kambani yanga yave nedambudziko kwemakore uye muna 2017 yakazivisa kuvharwa kwayo nekushaikwa kwemari yekubhadhara vashandi nevakakwereta.
Panguva iyoyo, Kyle Rankin, mupepeti waro, akatsanangura zvikonzero zvinotevera:
Kusuruvara kwangu kwekuti chimwe chinhu chandakanga ndashanda kwemakore gumi chakanyangarika chakatsiviwa nehasha zvekuti nharaunda yeLinux yaiita kunge yarasika nzira. Ndakarasika nzira. Akatora Linux uye yemahara software kurerutswa. Zvaive zvakajeka kwandiri kupfuura nakare kese kuti nepo Linux uye yemahara software yakanga yakunda muhondo yekurwisana neve tech giants makore gumi apfuura, vatsva vakanga vatora nzvimbo yavo panguva iyi, uye takavarega vachikunda. Kunyangwe ini ndanga ndanyora uye ndataura nezveLinux uye yemahara software kwemakore, uye ndanga ndaishandisa pachangu uye nehunyanzvi, ndainzwa kuti ndakanga ndisina kuita zvakakwana kutsigira chinhu ichi chandainyanya kufunga nezvacho.
Chibvumirano nechibvumirano neVPN sevhisi, Yakavanzika Internet Kuwanika, yakabvumidza kutangwazve kwenzvimbo iyi muna 2018. Asi, zvakangotora gore chete. Muna 2019 Rankin akanyora zvakare.
Nehurombo, hatina kupora nekukasira zvakakwana, uye patakaona kuti taifanira kufamba tega, takatadza. Saka pano tiri kutora yedu yechipiri, zvakanyanya kusanzwisisika, takaonekana. Chii chinoitika izvozvi? Takanyatsombundirana panguva yekuonekana kwekutanga, takambundirana zvekare nguva ino? Isu tinoita here kukwazisana uko kunoshanduka kuita ruoko-ruoko rwekugumbatira? Tinongo kwazisana uye kunyemwerera?
Linux Journal yadzoka
Ivo vanhu veSlashdot Media vatove nenhoroondo yekudzosa yakavhurika sosi inoenderana nzvimbo. Muna 2016 ivo vakachengetedza SourceForge, iyo yanga iri nzvimbo yekureverera yekuchengeta uye kurodha yemahara software zvirongwa kudzamara varidzi panguva iyoyo vauya nepfungwa yekusanganisira yechitatu-bato software kurodha mumabhaisikopo pasina kubvunza vanogadzira. Ivo zvakare vanoshandisa iyo nhau aggregator yezita rimwe chete.
Nezve Linux Journal, vanoronga kudhindisa zvemukati nekukurumidza sezvazvinogona. Parizvino ivo vari kutsvaga vabatsiri vanoda kuvhara nhau dzenyika yeLinux, gadzira dzidziso uye zvine mutsindo makomendi uye maforamu.
Zvinoenderana nechirevo muchirevo, havana hurongwa hwekufambisa zvakare modhi yekunyorera uyeVari kuenda kutarisisa kutsikisa zvemukati zvemahara. Hakuna kupi kwazvinotaura kana ivo vanobatana vachizochaja kana kuzvipira.
Kunyangwe kudzima kwacho, hapana kana nguva iyo saiti yakadzika (kunyangwe pasina zvemukati zvakatumirwa mushure mekuziviswa kwekudzima chaiko. Saka hapana chikonzero nei saiti yacho isingafanire kudzoka online ipapo ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux Journal yadzoka neSlashdot Media
Yakavharwa parata akadaro
«Muna 2016 ivo vakachengetedza SourceForge, iyo yanga iri nzvimbo yekuchengetedza nekurodha mahara software mapurojekiti" Zvino ndivo ivo vakaparadza sourforge vachibvumira zvinhu zvekupokana uye kushambadzira kwese kwese.
Pindura La parata enmascarada
Ndinovimba ndezve zviri nani!
Microsoft Edge iri kuuya kuLinux mune beta fomu muna Gumiguru